Bannaanbaxa looga xunyahay qaraxii Talaadadi oo Muqdisho ka dhacay; Shariif iyo Gaas oo la hadlay bannaan-baxayaasha. – Radio Daljir
Bannaanbaxa looga xunyahay qaraxii Talaadadi oo Muqdisho ka dhacay; Shariif iyo Gaas oo la hadlay bannaan-baxayaasha.
Oktoobar 10, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, Oct 09 ? Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay bannaabax aad u ballaaran oo ay ka qayb-galeen boqolaal dadweyne ah kaasoo ay ku muujinayeen dareenkooda ka xumaansho iyo sida ay uga murugaysan yihiin qaraxii dhimashada badan dhaliyey ee ka dhacay Muqdisho Talaadadii aynu soo dhaafnay.
Dadweynaha bannaanbaxa dhigayey oo iskugu soo baxay waddooyinka magaalada Muqdisho ayaa ku dhawaaqayey hal-ku-dhagyo ay ku cabirayaan sida ay uga xunyihiin weerarkii lagu xasuuqay ku dhawaad boqolka ruux oo u badnaa arday, waalidiin iyo shacab masaakiin ah, kaasoo lagu qaaday xaruntii Hargaha iyo Saamaha oo ay degganaayeen dhawr wasaaradood oo dawladda federaalka ah.
Bannaanbaxayaasha ayaa sidoo kale watay boorar ay ka muuqanayeen muuqaallo naxdin leh oo laga qaaday dadkii wax ku noqday qaraxaasi, iyadoo sidoo kalena dhawaaqa iyo hadallada dadku ay ahaayeen kuwo murugo iyo tiiraanyo huwan, waxaana maanta Muqdisho looga aqoonsaday maalintii carada.
Madaxda dawladda federaalka KMG ah ee ayaa la hadlay dadkii dibad-baxaasi iskugu yimid ugana hambalyeeyay muujinta dareenkooda ka xumaansho ee dhacdadii lagu laayey dadka badan iyo sida ay uga soo horjeedaan ficillada Al-shabaab.
Shariif Sh. Axmed, oo ka hadlay dhibaatada dilalka iyo qarxinta dadka ayaa sheegay in ay tallaabadaasi tahay mid aan marna wanaagsanayn, waxaana uu sheegay diinta islaamku in ay tahay mid badbaado iyo nabad-galyo ku salaysan.
Dhinaca kale R/wasaaraha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya Prof. Cabdiweli Maxamed Cali ?Gaas? oo maanta dalka dib ugu soo laabtay, lana hadlay bannaanbaxayaasha ayaa sheegay, si kulul u dhaleeceeyey dhacdadii weerar ee dadka badani ay ku naf-waayeen, waxaana uu dhinaca kale aad uga hambaleeyey shacabka Muqdisho sida ay u soo bandhigeen dareenkooda dhabta ah.
Md. Gaas, waxaa kaloo uu intaasi ku daray in ay sii wadi doonaan dagaalka iyo halganka ay kula jiraan Al-shabaab waa sida uu hadalka u dhigaye, isagoo intaasi raaciyey dadweynuhu in ay u guntadadaan sidii ay meel uga soo wada jeedsan lahaayeen dadka dhibka ku haya.
Baahin: Salaasa, Oct 11, Weriye Maxamed C. Kuuriya ~ Daljir ~ Bossaso. Saraakiisha ciidanka dawlada federaalka ah ee hogaaminaya dagaallada Muqdisho oo sheegay in aan weli la gaarin hadafkii dagaalka; Al-shabaab oo sheegay in ay xeelad dagaal uga baxeen fariisimadoodii, dagaalkuna uu socon doono; Xukuumada R/wasaare Gaas oo shir ka yeeshay dagaaladii 48-kii ka dhacay Muqdisho & dooddii baarlamaanka ee xadaynta xeebta Somaliya.
Taliyihii shalay lagu dhaawacay Bossaso oo xalay ku geeriyooday isbtitaalka Galkacyo, isla maantana la aasay.